Lalao Sage Class vaovao azo alaina ao amin'ny Black Desert Mobile
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Lalao Sage Class vaovao azo alaina ao amin'ny Black Desert Mobile
Pearl Abyss dia nanambara androany fa ny kilasy Sage vaovao mampientam-po dia azo alaina ao amin'ny Black Desert Mobile. Amin'ity herinandro ity, afaka miandrandra ny votoaty lalao vaovao Atumach Skirmish ihany koa ny Adventurers, izay ahitana mpilalao 25 ​​ho vondrona misy dimy hifaninana hahazoana valisoa.
Sage, Ilay Fahagola farany, dia kilasy karazana caster ary tompon'ny habaka sy ny fotoana izay mamoaka hery manaitra sy manimba. Nampiasa ny Kyve miendrika goba ho fitaovam-piadiany lehibe izy, dia manokatra korontana eny amin'ny habakabaka ary miantso ny Ator's Energy sy ny ody mahery vaika mahery vaika.
Ny fahaiza-manaony tsy manam-paharoa dia ahafahan'ny Adventurers manao fanandramana amin'ny fampifangaroana fahaiza-manao ary hahita fomba tsy manam-paharoa hahazoana tombony amin'ny toe-javatra miady samihafa. Ny sub-fitaovam-piadiana, Talisman, dia ahafahan'i Sage mandray endrika malalaka ary mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino amin'ny vavahadin-tserasera.
Anisan'izany ny fahaizan'i Sage
• Rift Chain: Sokafy ny vavahadin-tserasera mankany amin'ny refy hafa amin'ny fametrahana ny Kyve eo akaikin'ny fahavalo iray, dia avereno ny Kyve hanakatona ny vavahadin-tserasera ary hanimba ny fahavalo.
• Fitsaran'ny Ator: Antsoy avy any ambony ny herin'ny Ator, dia alefaso amin'ny fahavalo izany.
• Wormhole: Alefaso any amin'ny habaka ara-nofon'i Kyve ny vatanao mba handehanana soa aman-tsara amin'ny halavirana kely.
• Fahapotehan'ny Spatial: Mitondra fahavoazana goavana amin'ny fahavalo amin'ny famotehana ny habaka manodidina azy.
Ho fankalazana ny famotsorana an'i Sage dia misy hetsika fampisondrotana karama azo atao hatramin'ny 29 Novambra. Hahazo valisoa sarobidy toy ny Voahangy Mainty 70, Pet Tier 1000 ary Chest Costume Legendary ireo mpitsangatsangana izay mampiakatra ny Sage ho amin'ny ambaratonga 7.
Farany fa tsy ny kely indrindra, afaka mankafy ny hetsika Atumach Skirmish izay tia lalao fiaraha-miasa amin'ny fifaninanana, toerana misy ny Adventurers 25 ao amin'ny ankolafy 5 misy olona 5. Nifandona ny ankolafy ary nifarana ny lalao rehefa resy i King Griffon. Amin'ny fiafaran'ny Skirmish, ny mpandray anjara dia afaka mahazo ny Tombokase Atumach ary manakalo azy ireo amin'ny valisoa.